संग प्राप्त नयाँ सर्तहरू: के गर्छ डेटिङ फ्रान्स एक केटी अर्थ छ ।
एक केटी बाहिर जूनियर वर्ष एक गम्भीर सम्बन्ध, र एक सुन्दर हार संग ग्रीक पत्र अवश्य त्यो. यो मानिसहरू बुद्धि, बताउनु तपाईं संग ग्रीक डेटिङ फ्रान्स समारोह । एक मान्छे सुरु मा एक सधैं आफ्नो प्रेमिका पनि छ भने त्यो गैर-ग्रीक.
ग्रीक पत्र संगठन धेरै छन् संयुक्त राज्य अमेरिका मा लोकप्रिय छ । पुरुष समूह भनिन्छ, जबकि महिला यिनै हुन्. को एक भाग हुनुको यी समूह को एक अभिन्न भाग हो कलेज जीवन । यी मूलतः छन् संगठन को विद्यार्थी र बराबर हो परिवार को लागि तिनीहरूलाई अधिकांश. यो एक कस्टम नाम संग उनलाई दुई वा तीन ग्रीक पत्र । केही प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई समान ची, सिफ्ट रूई सिग्मा, सिफ्ट डेल्टा, थिटा, अल्फा सिग्मा एप्सिलोन, र बीटा ची. तिनीहरूले आफ्नै को एक सेट परम्परा र नियम । बीचमा विभिन्न परम्पराहरूको एक रोचक र रोमान्टिक भनिन्छ एक डेटिङ फ्रान्स । यो एक काम छ, को आफ्नो प्रेम देखाउने र प्रतिबद्धता गर्न आफ्नो प्रेमिका उनको एक हार संग आफ्नो पत्र । कुनै पनि मान्छे गर्न एक ग्रीक समूह सक्छन् आफ्नो प्रेमिका भने, उहाँले बारे गम्भीर छ उनको । उहाँले प्रश्न गर्न सक्छन् उहाँको भाइहरूले र प्राप्त पत्र । यो समारोह छ, विशेष छैन बस किनभने को मान्छे छ, आधिकारिक शुरू, आफ्नो केटी भाइहरूले, तर पनि किनभने यो पनि देखाउँछ आफ्नो भक्ति गर्न. यो हार भए धेरै इच्छा थियो पछि यो थकित द्वारा, एक को राजा लुई को फ्रान्स । भनेर गरेको कारण हार, र समारोह पछि नाउँ छ उनको । डेटिङ फ्रान्स एक राम्रो ठूलो समारोह मा सबैभन्दा परिसरों छ । सबै दाजुभाइ भेला लागि उत्सव, र छ प्रस्तुत गर्न यो केटी छ । यो पनि एक विशेष अनुष्ठान को आफ्नै गर्न यो डेटिङ फ्रान्स । सबै बालिका को रहस्य पत्ता लगाउन बस्ने एक सर्कल मा र पारित बलिरहेको मैनबत्ती वरिपरि । गर्ने महिला हुन जाँदै छ त झटका मैनबत्ती बनाउन र विशेष घोषणा । मैनबत्ती पारित गरेको छ एक पटक भने केटी पिन.
बस डेटिङ एक मान्छे, दुई पटक छ भने त्यो, र छ भने त्यो लगी । ग्रीक पत्र एक धेरै अर्थ गर्न
पत्र, एक लामो इतिहास र प्रतीकात्मक. यसरी दिने, कसैले सही गर्न लगाउने यी पत्रहरू हुन मानिन्छ छ एक काम को अनुग्रह हो । एक केटा सक्छन् मात्र एक केटी, यो बनाउँछ समारोह धेरै विशेष छ । यो समारोह छ, धेरै गम्भीर लिएका गरेर सबैको संग सम्बन्धित र रहस्य पत्ता लगाउन छ । जब एक मानिस र एक महिला छ भने डेटिङ सुरु, त्यो छ थाह हुन पिन छ । डेटिङ फ्रान्स एक जस्तै एक कदम बीच र संलग्नता छ । रही गरेर आफ्नो प्रेमी जस्तै छ, एक सपना साँचो आउन लागि सबैभन्दा बालिका । सबैभन्दा जोडे प्राप्त लगी चाँडै पछि डेटिङ फ्रान्स र अन्त विवाह रही छ । हुनत सबै समूह पालन परम्परा आजकल, तर यो अझै पनि धेरै लोकप्रिय मा सबैभन्दा
← पत्ता कोठामा
पूरा फ्रान्स मान्छे संग नयाँ सदस्य →